Ganacsadaha Adduunka Ugu Tijaarsan Bill Gates Oo Soo Bandhigay Suuli Casri Ah. – somalilandtoday.com
Ganacsadaha Adduunka Ugu Tijaarsan Bill Gates Oo Soo Bandhigay Suuli Casri Ah.
(SLT-Beijing) Bilyaneerka iyo aasaasaha Microsoft Bill Gates ayaa waxaa uu gacanta ku haya saxaro ku jirta dhalo, xilli maanta uu ku sugnaa magaalada Beijing. Waxaa uu khudbad ka jeedinayay xaflad lagu soo bandhigayay Suuli cusub oo casri ah oo aan biyo u baahneen.
Hay’adda samafalka ee Bill & Melinda Gates ayaa ku kharash gareeysay lacag ka badan $200 milyuun oo doolar cilmi baaris lagu sameeyanayay Suuligaan taas oo qaadatay muddo toddobo sano ah.
Waxaa masraxa lagu soo bandhigay agab loogu talagay nadaafadda, kuwaas oo baabi’inaya bakteeriyada khatarta ah sidoo kalana ka hor tagaya cudurada.
Agabkaan ayaa sidoo kale kala saaraya saxarada iyo biyaha suuliga
“Waxaan dhihi karaa 10 sano ka hor waligay kuma fikirin in aan wax badan ka ogaado saxarada”,ayuu Mr Gates ku kaftamay intii lagu guda jiray shirka.
Ganacsadahaan ayaa waxa uu furayay xaflad 3 maalmood soconaysa oo ka dhacaysa dalka Shiinaha-taas oo uu ka soo qeyb galay hogaamiye Xi Jinping.
Mashruucaan ayaa looga gol leeyahay in isbedel lagu sameeyo suuliga.
Mr Gates ayaa sidoo kale agabkaan la soo bandhigay ku tilmaamay in uu yahay hormarkii ugu muhiimsanaa ee la gaaro ku dhawaad laba boqol oo sano.
Madaxa Microsoft ayaa dhalada saxarada ay ku jirto ee dhiniciisa taalay ku tilmaamay in ay ku jirto 200 oo tirilyan oo rotavirus ah… 20 bilyan oo bacteeriya ah iyo 100,000 oo ah ukumaha aan isha qaban.
Sida ay sheegtay Hay’adda Caafimaadka Aduunka ee (WHO) ilaa 2.3 milyan oo qof oo dunida ku nool ayaan weli haysan adeegyada aasaasiga ah ee nadaafadda. Waxa ayna arintaan sababi kartaa cudurada sida daacuunka, shuban biyoodka iyo santariyada.